Archive for September, 2012 « EcoBurma – travel to Burma / Myanmar
Weekly EcoBurma Roundup #13
/ September 26, 2012 / 1 Comment
Dear Readers, This week, we will focus our attention on the last recent economic developments in Burma: What works and what are the pitfalls to avoid? In this blog, we have already emphasized the opening and expansion of Burma, following the political reforms that occurred in Burma last year. And...
Posted by EcoBurma
On6September 2012, we handed over €50 to Mr. Thuya Thwin in Mandalay as acknowledgment for his contribution to the contest. While two of the jury members recommended to cancel the jury prize since the small number of works that qualify in terms of the criteria makes it impossible...
Dear Readers, We would like to apologize for the lack of post last week. This week, in our latest “Weekly EcoBurma Round-up”: The tourism boom in Burma and unconventional tips on responsible travel are back in the limelight. Let’s begin with the latest news on Burma’s flourishing tourism trade. The...
Weekly EcoBurma Roundup #11
Dear readers, What is going to change in Burma in the near future? This week, we will share the latest news on the economical expectations for Burma, the attempts for the regaining of some fundamental human rights and freedom and the controversies involved. And finally, like every week, we will...
Posted by participant in contest
In Myanmar,anon-profit group named as clown doctor’s group was founded in February 2012. The purpose of this group is to cure the mind of child patients to be happy. At the present time, they perform their duties in Yangon Children General Hospital. So, they come to that hospital...
If you cannot read the font, download the text here as PDF. ကားတဈစီးပွီးတဈစီးထိုးစိုကျလာကွပွီး စညျကားနသေောလူတှကေိုမွငျရတာ စိတျမသကျမသာနဲ့ပဲ ကြှနျတျော စိတျမကောငျးဖွဈလာ ရသညျ။ ရုပျရှငျရုံတှေ၊ စားသောကျဆိုငျတှေ၊ အပနျးဖွဥေယြာဉျတှမှောမြိုး စညျကားနရေငျတောငျ မုဒိတာပှားနမေိမှာပါ။ အခုတော့ အထူးကုဆေးရုံကွီးမြားမှာ အပူရုပျဟနျလုပျပွီးလာနကွေတာ ဘာရောဂါ ဘာဒဏျရာတှမှေနျးမသိပမေဲ့ သူတို့တှရေဲ့ရငျထဲမှာတော့ ဒုက်ခဝဒေနာ တှဟော တနျတူရညျတူရှိလိမျ့မညျဆိုတာ ကြှနျတျောတှေးကွညျ့လို့ရသညျ။ ဘာကွောငျ့ကိုယျခငျြးစာနိုငျလညျးဆိုတော့ ကြှနျတျော့မှာလညျး အပွငျးထနျဆုံးရောဂါတဈခု စှဲကပျနေ၍ဖွဈသညျ။ ဆေးကောငျတာမှာ ဆေးဝယျဖို့ရပျနသေော ကြှနျတေျာ့ကို ဆေးကောငျတာက ကောငျမလေးက ဂရုဏာသကျစှာ ကွညျ့လသေညျ။ သူမြားတှေ သနားဖှယျကွညျ့လြှငျ ကြှနျတျောမနတေတျပေ။ အထူးသဖွငျ့ မိနျးမတှေ ကွညျ့သောအခါဖွဈသညျ။...
If you cannot read the font, download the text here as PDF. မငွေိမျးခမျြး(၁၀)တနျးအောငျသောအခါ ဒဂုံတက်ကသိုလျ၌ တကျရောကျပွီး အင်ျဂလိပျစာအဓိက ဘှဲ့ဖွငျ့ကြောငျးပွီးခဲ့သညျ။ ဘှဲ့ရပွီးသောအခါ မမေသေညျ ဆရာမဘဝမှ အငွိမျးစားယူပွီးသညျဖွဈ၍ သားအမိ နှဈယောကျ၏တာဝနျမှာ မငွေိမျးခမျြးအပျေါသို့ ကရြောကျလာသညျ။ ဒီလိုနှငျ့ မိမိ၏အခွအေနကေို နားလညျ သော သူငယျခငျြးဖွူစငျ၏အဈမသညျ Tourism ကုမ်မဏီတဈခု၌ ၀ငျရောကျလုပျကိုငျနရော ကုမ်မဏီ၌ ၀နျထမျး အသဈခနျ့ထားရနျရှိကွောငျး ဖွူစငျမှတဆငျ့ပွောရာ မငွေိမျးခမျြးလညျး အဲဒီကုမ်မဏီပိုငျရှငျအိမျ၌ အလုပျ လြှောကျလှာသှားတငျခဲ့သညျ။ ကုမ်မဏီပိုငျရှငျအနျတီမှ လူလိုသောအခါတှငျ မငွေိမျးခမျြးကို ပွနျလညျ ဆကျသှယျမညျဟုပွောပွီး လြှောကျလှာအားလကျခံထားလိုကျသညျ။ မငွေိမျးခမျြးလညျး မိခငျ၏တာဝနျကိုယူလိုစိတျကွောငျ့ အလုပျရရှိနိုငျရနျ...
ပြိုင်ပွဲဝင် ၀တ္တုတို ဆောင်းလုလင် မိုက်တယ်ဆိုတာ ဒီလိုလား ငထူကြီး ဒီနေ့ထောင်မှလွတ်ခဲ့သည်။ ငထူကြီးသည် သူ့တစ်သက်တာတလျှောက်လုံး ထောင်ထဲမှာသာ အချိန်ကုန်လွန်၍ ထောင်ထဲမှာပင် သေရလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မျှော်လင့်ထားသူဖြစ်သည်။ ထောင်အာဏာပိုင်များက သူ့ကိုခေါ်ပြီး ယနေ့မှစ၍ ထောင်မှထွက်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီဟု ပြောလိုက်သည့် စကားကို သူ့အား ငရဲသို့သွားစေဟု အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည့်သဖွယ် ငထူကြီး ခံစားခဲ့ရ၏။ “ခုဆို ခင်ဗျားဟာ လွတ်လပ်တဲ့ သာမန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီ၊ ခင်ဗျားအနေနဲ့အပြင်လောကမှာ လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ပြီ၊ ဒီတော့ ကိုထူကြီး- ခင်ဗျားအနေနဲ့အတိတ်က ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ မိုက်ပြစ်တွေကို မေ့ပစ်လိုက်ပါ၊ မိုက်ပြစ်တွေရဲ့ ဒဏ်ကို ပေးဆပ်ပြီးပြီ၊ ခ၀ါချခဲ့ပြီးပြီလို့ မှတ်ယူပါ၊ အပြင်လောကမှာ လူသစ်စိတ်သစ်နဲ့ ရိုးသားတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုလုပ်ပြီး...
If you cannot read the font, download here the text as PDF. ဆရာမ ကြာအုန်းကြည်သည် စိတ်မပါ လက်မပါ ကျောင်းသို့ရောက်လာခဲ့သော်လည်း ပြာယာတခတ်ခတ် ဂနာမငြိမ် ဖြစ်နေလေ၏။ “ထူးပါဘူး ကျောင်းအုပ်ကြီးဆီ မျက်နှာပူပူနဲ့ သွားရဦးမှာပဲ” ဟု တီးတိုးညည်းကာ ခပ်မြန်မြန် သွားလိုက်၏။ကျောင်းအုပ်ကြီးရှေ့ရောက်သည်နှင့် မူမမှန်သူတို့၏ ထုံးစံအတိုင်း မျက်နှာတပျက်ပျက်နှင့် ရွံ့ကာတွန့်တုန်နေ၏။ “ဆရာမကြည် ဘာကိစ္စလဲဗျ” “ဟိုဟာ ဟို ဟို အမေ့ဆေးခန်းလိုက်ပို့ချင်လို့ နေ့တစ်ဝက်ခွင့် ယူ ယူ ……” “ရောဂါက တော်တော်ကြီးမယ်ထင်တယ် ခဏခဏပဲနော်” ဆိုသောစကား ကြားလိုက်သည်နှင့် ဆရာမ၏ မလုံသောအိုးက ပွင့်မလိုရှက်သွားပြီး...